ICJ မှာတရားစွဲထားတဲ့အမှုကို ဖြေရှင်းဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သွားတဲ့ အဖွဲ့မှာ တပ်ကိုယ်စားလှယ် မပါ
ICJ မှာတရားစွဲထားတဲ့အမှုကို ဖြေရှင်းဖို့ ဒေါ်အောင်...
8 ธ.ค. 2562 - 13:31 น.
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ)မှာ တရားစွဲဆိုလျှောက်ထားမှုကို တုံ့ပြန်ရန် ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ နေပြည်တော်ကနေ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သည်ဟိတ်ဂ်မြို့ကို အထူး လေယာဉ်နဲ့ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်တွေ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ် ခံရမှုကို တားဆီးဖို့၊ အပြစ်ပေး အရေး ယူဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ဂမ်ဘီယာက နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ အမှုဖွင့်တရားစွဲခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။
ဒီစွပ်စွဲချက်ကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် နယ်သာလန်နိုင်ငံကို ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်နေ့မှာ စတင် ထွက်ခွာသွားတဲ့မြန်မာအဖွဲ့မှာ တပ်ဘက်က ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
ICJ အမှုကို တုံ့ပြန်ဖို့ သဟေ့ဂ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားမယ်
ICJ မှာ မြန်မာအမှုဖွင့်ခံရမှု သိသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်
မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့စွပ်စွဲမှုကို သွားရောက်ဖြေရှင်းရာမှာ လိုအပ်ရင် တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လိုက်ပါဖို့ရှိတယ်လို့ အစောပိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုထားဖူးပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ဖွဲ့စည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာခုံရုံး ICJ မှာ တရားရင်ဆိုင်တဲ့အခါ ဥပဒေကြောင်းအရ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ့် နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အထူးအဖွဲ့ထဲမှာတော့ တပ်ဘက်ကကိုယ်စားလှယ် ၂ဦးပါဝင်တယ်လို့ သိရပါ တယ်။
အဲဒီအထူးအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဦးဆောင်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားရေး၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့ နေချုပ်ရုံးနဲ့ စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့က ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အထူးအဖွဲ့မှာ ဘယ်နှစ်ဦးပါဝင်ပြီး ဘယ်လို လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ အသေးစိတ်မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။
ဂမ်ဘီယာရဲ့စွပ်စွဲမှုကို ဖြေရှင်းရာမှာ တပ်ကဘယ်လိုကူညီမှာလဲ
ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာသွားရောက်တဲ့ မြန်မာအဖွဲ့ကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအနေနဲ့ ဦးဆောင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပြည်ထောင် စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့က တာဝန်ရှိသူတွေလိုက်ပါသွားပါတယ်။
သည်ဟိတ်ဂ်ကိုသွားတဲ့အဖွဲ့မှာ တပ်ဘက်က ကိုယ်စားလှယ်တွေလိုက်ပါသွားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်း တပ်အနေနဲ့ လိုအပ်တာတွေကို ပြည်တွင်းကနေဆက်သွယ်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
' ' ဟိုဘက်မှာ လိုအပ်တာရှိရင် ရှေ့နေချုပ်ရုံးကခေါ်သွားတဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တစ်ယောက်ပါတယ်။ သူကတဆင့် ဒီဘက်ကိုဆက်သွယ်မယ်လို့သိရတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ အကြိမ်ကြိမ်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီးပြီ။ ဟိုဘက်မှာထပ်မံလိုအပ်လာရင် လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။''လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ICJ မှာ မြန်မာက ရင်ဆိုင်မယ့် အစီအစဉ်တွေက ဘာတွေလဲ
ဒီဇင်ဘာကြားနာမှုတွေမှာ ဘယ်ကိစ္စအပေါ် ICJ အာရုံစိုက်မှာလဲ
သဟေ့ဂ်မြို့ ငြိမ်းချမ်းရေး နန်းတော်မှာ ရုံးစိုက်တဲ့ ICJ
ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ ၁၂ ရက်နေ့အထိ ၃ရက်တာ အတွင်း နှစ်နိုင်ငံ လျှောက်လဲကြမယ်
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက် (Provisional Measures) ချမှတ်ပေးဖို့ လျှောက်ထားချက် နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဘက်စလုံးက နှုတ်နဲ့လျှောက်လဲ တင်သွင်းတာကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်၊ ၁၁ ရက် နဲ့ ၁၂ ရက်တို့မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမရက် ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ ရက်နေ့မှာ ဂမ်ဘီယာက မနက် ၁ဝ နာရီကနေ နေ့လယ် ၁ နာရီထိ ထွက်ဆိုချက် ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယရက် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်မှာတော့ အလားတူ အချိန် အတွင်းမှာပဲ မြန်မာက ထွက်ဆိုချက် ပေးဖို့ ICJ က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ ၃ ရက်မြောက်မှာတော့ နှစ်နိုင်ငံစလုံး ဒုတိယအကျော့ အနေနဲ့ ကိုယ်စီ ထွက်ချက်တွေ ပေးဖို့ ရှိတာမှာ ဂမ်ဘီယာက မနက် ၁ဝ နာရီကနေ ၁၁ ခွဲ၊ မြန်မာက ညနေ ၄နာရီခွဲကနေ ၆ နာရီထိ ထွက်ဆိုချက်တွေ ပေးရမယ်လို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဒီလိုလျှောက်လဲရာမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အနေနဲ့ အဆိုပါ တရားရုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဦးဆောင်ကာကွယ် ပြောကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ကာကွယ်လျှောက်လဲဖို့ နိုင်ငံတကာက ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဥပဒေပညာရှင် ရှေ့နေကြီးတွေကို ငှားရမ်းထားပြီးဖြစ် တယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ကပြောထားပါတယ်။
ICJ အမှု - မြန်မာနဲ့ မစိမ်းတဲ့ ဂမ်ဘီယာရဲ့ ရှေ့နေအဖွဲ့ ဖိုလီဟော့ဂ်
ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်နေ့အထိ မြန်မာဘက်က ငှားရမ်းထားတဲ့ရှေ့နေတွေက ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကတော့ ဖိုလီဟော့ဂ် Foley Hoag ဆိုတဲ့ အမေရိကန် ရှေ့နေ အဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ထား ပါတယ်။
ဖိုလီဟော့ဂ်ဟာ ICJ အပါအဝင်၊ နိုင်ငံတကာ တရားရုံး၊ အနုညာတခုံရုံးတွေမှာ နိုင်ငံတွေကို ကိုယ်စားပြုပြီး ရှေ့နေလိုက်ပေးတဲ့ နေရာမှာ အထူးပြု ကျွမ်းကျင်တဲ့ အဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ICJ မှာတရားစွဲထားတဲ့အမှုကို ဖြေရှင်းဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သွားတဲ့ အဖွဲ့မှာ တပ်ကိုယ်စားလှယ် မပါ